Fursado Iskaa Wax U Qabso Ah Oo Ay Leeyihiin Xayawaanku | Tonka Adeegaa
Bulshada Xayawaanka ee Degmada Hennepin
Shakhsiyaad fara badan, koox iyo adeegyo bulsho oo loo heli karo tabaruceyaasha Dhallinyarada ah ee jira 16 iyo wixii ka weyn. Tabaruceyaashu waa inay lahaadaan xirfado isgaarsiineed oo wanaagsan ayna ku raaxaystaan la shaqeynta dadka iyo xayawaanka. Tababar ayaa loo baahan yahay.
Qaban kara kansarka
Haddii aad dooneysid inaad tijaabisid biyaha taageeraya ururkeenna ama aad labada cagood la soo booddid, waxaa jira fursado iskaa wax u qabso ah oo ku habboon himilooyinkaaga, jadwalkaaga, awoodahaaga iyo macnahaaga.
Bulshada Carver-Scott Humane
Waqtigan xaadirka ah lacag aruurinta si loo dhiso hoy, CSHS waxay soo dhaweyneysaa mutadawiciinta dhalinyarada ah si ay uga caawiyaan lacag ururinta iyo dhacdooyinka bulshada.
Tabaruceyaashu waa wadnaha iyo nafta Caawinta Cows. Maaddaama aan nahay urur aan faa'iido doon ahayn, waxaan ku tiirsan nahay mutadawiciinteenna si aan u xaqiijino himiladeenna: si loo sii xoojiyo madax-bannaanida shakhsiyaadka naafada ah ee jirka iyadoo la adeegsanayo eeyaha adeegga.
Xannaanada dhallinyarada oo bixisa barnaamijyo la-talin faras la xiriira oo loogu talagalay dhalinyarada la tacaalaysa arrimaha maskaxda, jirka iyo shucuurta. Tabaruceyaal ayaa loo baahan yahay inay ku barbar socdaan fardaha, ciyaaraha leedhka, alwaaxa iyo mashaariicda farsamada iyo inay qabtaan shaqooyinka aasaasiga ah ee beeraha. Khibrad looma baahna, waan ku tababbaraynaa!
Waxay bixisaa afar barnaamij xagaaga ah oo loogu talagalay mutadawiciinta Dhallinyarada ah ee 13 iyo ka weyn. Codsiyada ku eg Maajo 1 ee sannad kasta.
Soo Celiso Dahabka Minnesota (RAGOM)
Haddii aad leedahay dareen ah Soo Celinta Dahabiga ah, wakhti dheeraad ah iyo qalbi jacayl ka buuxo si aad ula wadaagto eeyahaas aadka u gaarka ah, waxaan dooneynaa inaan kaa maqalno. Xitaa haddii aadan eey u qaadan karin gurigaaga, waxaan kuu haynaa fursado kale oo badan.
Fuulitaanka faraska daaweynta iyo gaari wadista dadka waaweyn iyo carruurta naafada ah. Tabaruceyaashu waxay u baahdeen inay horseed u noqdaan fardaha oo ay ku ag ag socdaan fuulitaanka. Khibrad fardo aan loo baahnayn, tababar ayaa la siiyay.
Pet Haven ee Minnesota
Pet Haven ayaa badbaadisa bisadaha iyo eeyaha waxayna heshaa guryo korsasho, ma jiro hoy la helo. Mutadawiciin loo baahan yahay munaasabadaha korsashada.